Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Rwanda » Rwanda New Official Decree neWildlife Conservation Society
Mufananidzo nerubatsiro rwaJeffrey Strain kubva kuPixabay
Rwanda ndiyo ichange iri muzinda weWildlife Conservation Society (WCS) mushure mekunge Mutungamiri Paul Kagame vasaina chisungo chekugadzwa kwemahofisi makuru munyika yavo. The Wildlife Conservation Society isangano repasi rose risiri purofiti iro rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango uye manejimendi emapaki pasi rose.
Vavariro yeWCS ndeyokuchengetedza nzvimbo dzomusango hurusa pasi rose munzvimbo 14 dzinokosha idzo dzimba dzeinopfuura 50 muzana yezvakasiyana-siyana zvenyika. Chisungo chemutungamiri wenyika chinobvumidza WCS kuve nechigaro muRwanda chakaburitswa muOfficial Gazette yemusi wa31 Zvita 2021, mushumo kubva kuKigali wakadaro.
The Sangano Rekuchengetedza mhuka ichapihwa rezenisi rekuva nezvivakwa muRwanda zvinosanganisira zvivakwa, ivhu, midziyo, mahofisi, marabhoritari, nezvimwe zvivakwa zvichabatsira mukuzadzisa zvisungo zvayo pasi pechibvumirano chakasainwa nemapato ese.
Chibvumirano ichi chinotiwo michina ichadiwa neWCS mubasa rayo remazuva ese inokodzera kusabhadhariswa mutero uye kuti Hurumende yeRwanda ichaita kuti zvive nyore kuti Visa ive nevashandi vayo vekunze vanoshandira kuRwanda. Vashandi ava nemhuri dzavo vachange vaine kusadzivirirwa uye mukana sevamwe vari munharaunda yavo, chirevo chakadaro.
Kuvapo kweWCS muRwanda kuchabatsira mukuita zvirongwa zvekuchengetedza mhuka dzesango kune dzimwe nyika sekugadzirisa kukanganisa kwemamiriro ekunze. Sangano iri rinoitawo tsvakiridzo pamusoro pekusiyana-siyana kwezvipenyu, kuchengetedza kwemhiri kwemiganhu uye zviitiko zvezvipenyu zvakasiyana-siyana, uye rinoratidza mhinduro kumatambudziko anotyisidzira zviwanikwa.
Yakatangwa muna 1895, muUnited States of America (USA), WCS iNon-Government Organisation (NGO) ine muzinda muNew York.
Musangano wedare remakurukota reRwanda wakabvumidza muna Zvita gore rapfuura, chikumbiro chekudoma Nyungwe National Park senzvimbo yeUNESCO World Heritage. Nyungwe Park inokosha US$4.8 bhiriyoni nekukosha kwayo uye inopa chikafu 2 dzenzizi huru pasi rose - Congo neNile. Ndiwowo manyuko einenge 70 muzana yemvura yakachena yeRwanda.
Chirongwa chekuchengetedza uye kugadzirisa mamiriro ekunze chinodaidzwa kunzi "Kuvaka Resilience yeNharaunda Dzinotapukira kuKusiyana Kwemamiriro ekunze muRwanda's Congo Nile Divide kuburikidza neSango uye Landscape Restoration" ichaitwa munzvimbo dzakatenderedza Nyungwe National Park, Volcano National Park, uye Gishwati-Mukura National Park.
Gishwati-Mukura landscape yakatozivikanwa pasi rose mushure mekudomwa kuti UNESCO biosphere reserve, ukuwo Volcano National Park inozivikanwa nemagorila ayo yakaitwa sebiosphere reserve makore mazhinji apfuura.
Dzimwe nhau dzeRwanda
#kuchengetedzwa kwemhuka dzesango
hurumende Kigali Nile Sangano Resilience Rwanda vanhu UNESCO nyika dzakabatana Volcano Wildlife
Mazhinji emhuri ane hushamwari ski resorts muUSA